Taylor Swift's discography haichisiri chete paApple Music | Ndinobva mac
Taylor Swift's discography haichisiri chete paApple Music
Kubva Chishanu chadarika, muimbi Taylor Swift akambomupawo discography yake yese pane ese emimhanzi mapuratifomu, asisiri iye oga uye achingoona kurudziro yevashandisi vazhinji kunakidzwa neiyo Taylor Swift discography. Swift anga agara achinetseka pamusoro pekushambadzira mimhanzi masevhisi uye gore risati ratangwa reApple Music, rakadhonza kabhuku karo rese reaya masevhisi, kumanikidza vashandisi kuti vatarise kana kushandira kubiridzira kana vaida kunakidzwa nenziyo dzavo chero nguva nenzvimbo. Apple yakatora mukana wekumutamisa uye kumupa katarogu chete, chibvumirano icho chingangove chapera.
Asi sekutaura kwa Taylor Swift izvi zviri kukonzerwa nemhemberero yekuti dambarefu rake razvino rakatengesa mamirioni gumi emakopi uye rasvika nziyo zana miriyoni. Mari inofambisa zvese uye Swift inoda kumwe kuratidzwa kushambadza kuburitswa kwavo kwese discography paApple Music. Iyo feather duster yakaonekwa. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti Swift akabuda achidzivirira akazvimiririra rekodhi makambani apo Apple yakazivisa kuti mukati memwedzi mitatu yavakapa mahara, iyo muzana yaizovabhadhara yaizove yakaderera pane zvakajairwa, ichiita kuti Robin Hood ive imwe yediki. Uye zvakare, kufamba uku kwakamuwana iye kuti ave protagonist mukuru weiyo Apple Music ads.
Asi nekufamba kwenguva, takakwanisa kuona kuti sei iyo yese yaive maneuver yakarongedzwa pamwe chete neApple kuvhura chete discography yake yese, vachipokana kuti vakomana veCupertino vakabhadhara kupfuura Spotify, pakufamba kwenguva zvakaratidzwa kuti masevhisi ese erudzi urwu anobhadhara zvakafanana muzana. Asi zvakadaro, mushure medambudziko rese, chakakosha ndechekuti kana iwe uri mushandisi weimwe inomhanyisa masevhisi emimhanzi, unogona ikozvino kunakidzwa nekodhi yavo yese pasina kuita Apple Music.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Taylor Swift's discography haichisiri chete paApple Music
Iyo Notebook application inosvika vhezheni 2.0
watchOS 4 ichawedzera keyboard kuita mafoni